Madaxweyne Farmaajo oo sheegay inay rabaan dowlad dhexe oo xoog badan | Goojacade
Home Somalia Madaxweyne Farmaajo oo sheegay inay rabaan dowlad dhexe oo xoog badan
Madaxweyne Farmaajo oo sheegay inay rabaan dowlad dhexe oo xoog badan
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlayay xaflad qalin jabin ah oo loo qabtay ardayda jaamacadda ummadda ayaa ka hadlay arrimaha siyaasadda dalka ka taagan, gaar ahaan isfaham darada ka dhex jirta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada.
“Qof kasta si ha u arko, wuxuu ka mid yahay dooda socota, oo ay dowladnimadeena ku dhismayso, oo aan ku fasireyno muxuu yahay federaal iyo muxuu yahay confederate (habka kale ee federaalka ee dowladaha isku biirey ), inkasta oo nala dacaayadeeyo, anaga waxaan niraahnaa federaalka saxda ah anaga ayaa ah” ayuu yiri madaxweynaha.
Waxa uu intaas ku daray “Maxaa yeelay waxaan rabnaa dowlad dhexe oo xoog leh, dowlad dhexe oo ciidan leh oo dalka difaaci karta, waxaan rabnaa dowlad dhexe oo arrimo dibadeed oo adag leh, dowlad dhexe oo xuduudaheeda illaalisa” ayuu yiri madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sidoo kale dhallinyaradii uu la hadlayay ku dhiirogaliyay in aysan aqbalin wax ka yar dowlad adag.
Farmaajo ayaa sheegay in in cid kasta oo kasoo horjeedda arragtida dowladda ay iyadu tahay tan kasoo horjeedda federaalka.
Madaxweynaha ayaa maamul goboleedyada doorkooda ku sheegay daadajinta adeegyada.
Hadalka madaxweynaha ayaa kusoo hagaagayaan xilli ay jiraan xiisado siyaasadeed oo dalka ka taagan, gaar ahaan Galmudug iyo Jubbaland oo labaduba xilligii doorashada jooga.
Previous articleInqilaab Itoobiya ka socda oo lagu dilay Madaxweynihii Kilinka Amhara iyo saraakiil sare
Next articleHoggaamiyihii ka dambeeyay afgembigii dhicisoobay ee Itoobiya oo la toogtay